ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်မှာပိုင်ရှင်တွေ | yathar
Smart Order Campaign
yathar သည် သင့်ရဲ့ဘဝကို စမက်ကျဖို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆီသို့ အပြုံးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။
yathar Smart Order သည် သင့်၏ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် tablet တွင် လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၃ လစာ အသုံးပြုခြင်းအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။
စက်ပစ္စည်း တပ်ဆင်ခအတွက် လည်း အခကြေးငွေ လုံး၀ပေးရန် မလိုအပ်သောကြောင့် သင်သည် ကုန်ကျစရိတ်လုံး၀မရှိဘဲ ( zero cost) ဖြင့် yathar Smart Order ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အများဆုံး မီနူး ၂၀၀ အထိ စာရင်းထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
သင်သည် Light Plan တွင် မီနူး ၂၀၀ ထိ စာရင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Premium Plan ကဲ့သို့ပင် ကမ်ပိန်း ၃ လအတွင်း Light plan တွင် မီးနူး ၂၀၀ ကို စာရင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဤကမ်ပိန်းသည် yathar မှ ရန်ပုံငွေအပြည့်အ၀ဖြင့် တာ၀န်ယူမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
“ Smart Order ကို အသုံးပြုပြီး Smart Goods ကို ရယူလိုက်ပါ။”
စားသုံးသူများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စားသုံးသူတစ်ယောက်သည် Smart Order ကို အသုံးပြုပြီးသည့်အချိန်တိုင်း ဆုကြေး အဖြစ် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ၁၀ ခုကို ကံစမ်းနိုင်မည့် ကမ်ပိန်းသို့ ၀င်ရောက် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
There are no automatic charges after the period.
ပါဆယ်နှင့် ဆိုင်ထိုင် အော်ဒါများအတွက် အလွယ်တကူ ကိုယ်တိုင်မှာယူရသော စနစ်
ကျွန်ုပ်သည် ပါဆယ်နှင့် ဆိုင်ထိုင် အော်ဒါစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုချင်သော်လည်း မည်သို့ လုပ်ရမည်ကို မသိသောအခါ။သတ်မှတ်ထားသောစက်၏ စရိတ်ကို သင် မတတ်နိုင်သောအခါ…….yathar မှ Smart Order သည် web ကို အခြေခံသော ကိုယ်တိုင်မှာယူနိုင်သည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၄င်းကို စားသုံးသူ၏ စမတ်ဖုန်းမှတဆင့် အကောင်ထည်ဖော် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Smart Order သည် ထပ်တိုးကုန်ကျစရိတ် သို့ ထိန်းသိမ်းစရိတ်များ မရှိသောကြောင့် ၎င်းကို အလွယ်တကူ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
လွယ်ကူချောမွေ့စွာ အော်ဒါမှာယူနိုင်ရန်အတွက် Delivery ၀န်ဆောင်မှုဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ yathar သည် လူကြိုက်များသော delivery ၀◌န်ဆောင်မှုများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် သင့်၏ဆိုင် page မှတစ်ဆင့် အမျိုးမျိုးသော delivery ၀◌န်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် အကျိုးရှိသော ပရိုမိုးရှင်းများကို ပြုလုပ် ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် စားသုံးသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
စာရွက် မီးနူးကို နူတ်ဆက်ခဲ့ပါ။ အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်နိုင်သော ဒီဂျစ်တယ် မီနူးမှ ကြိုဆိုပါတယ်….
ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ရန် မလိုအပ်သော ဒီဂျစ်တယ် မီနူးသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ဓာတ်ပုံ၊ စေ◌ျးနှုန်းများနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကိုလည်း သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်း ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။အသုံးပြုသူများးအတွက်လည်း သင်သည် အထူးQR codes များကို အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကူပွန်များ၊ကမ်ပိန်းများဖြင့် စာသုံးသူများကို ဆွဲဆောင်ကြပါစို့။
သတ်မှတ်ထားသော control panel မှတစ်ဆင့် သင်ကိုယ်တိုင် သင့်ဆိုင်အတွက် ကူပွန်များကို အချိန်မရွေး ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။လျှော့စေ◌ျး၊ အချိန်ကာလ နှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း သင်ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။၎င်းကို သင့်ဆိုင်အရောင်းမြှင့်တင်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော control panel မှတစ်ဆင့် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို တစ်နေရာတည်းမှ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
၂၄/၇ အသုံးပြုနိုင်သော အွန်လိုင်းကြိုတင်မှာကြားမှု စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်။
ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန် ဖန်ရှင်သည် သင့်အား အချိန်ကာလ၊ လျှော့စေ◌ျးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အသေးစိတ်သတ်မှတ်ထားရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Review နှင့် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
Review ပေးသောသူများကိုလည်း အလွယ်တကူ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံများကကိုလည်း အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် yathar ၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲနေသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် ပါတနာအနေဖြင့် ပါ၀င်နိုင်သော ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတီင် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်း နှင့် သီးသန့် အစီအစဉ်များအတွက် community တစ်ခုအနေဖြင့် အဓိကထား လုပ်ဆောင်ပါသည်။
yathar Premium Community
Cuisine / Service: 10
Cuisine / Service: 100